I-Multidisciplinary Dutch Law Firm e-Eindhoven nase-Amsterdam
Inkampani » I-Multidisciplinary Dutch Law Firm
UKUJWAYELEKELA KOKUGUQUKA KOKUFANELEKA KOKUFA (GDPR)
IMOTO ESEZIMISELAYO IMITHETHO EYODWA
I-Multidisciplinary Dutch Law Firm
I-Law & More iyinhlangano eqinile yezomthetho yamaDashi yemithetho ehlukahlukene nezeluleko zentela ezibandakanya umthetho wamaDashi wenkampani, yezentengiso neyentela futhi uzinze I-Eindhoven futhi Amsterdam.
Ngasemuva kwenkampani yayo nentela yentela, i-Law & More ihlanganisa ukwaziwa kwenkampani enkulu nokwelulekwa ngentela ngokunaka imininingwane nangesevisi eyenziwe ngezifiso ongayilindela inkampani yezimbali. Singamazwe aphesheya ngokweqiniso mayelana nobubanzi kanye nohlobo lwezinsizakalo zethu futhi sisebenzela uhla lwamakhasimende amaDashi angaqondakali nawamazwe omhlaba, ukusuka ezinkampanini nasezikhungweni kuya kubantu ngabanye.
UMthetho nokuningi unakho ukusebenzisa iqembu elizinikele labameli bezilimi eziningi nabeluleki bezentela abanolwazi olunzulu emkhakheni wemithetho yenkontileka yamaDashi, umthetho wenkampani waseDutch, umthetho wentela waseDashi, umthetho wokuqashwa waseDashi kanye nomthetho wepropathi waphesheya. Le nkampani ibuye ibhekele ukuhleleka okusebenzayo kwentela yempahla nemisebenzi, umthetho wamandla waseDashi, umthetho wezimali waseDutch kanye nokuthengiswa kwezakhiwo.
Noma ngabe uyinhlangano yamazwe ahlukahlukene, i-SME, ibhizinisi elisafufusa noma umuntu ozimele, uzothola ukuthi indlela yethu ihlala ifana: ukuzibophezela ngokuphelele ekufinyelelekeni nasekuphenduleni ngezidingo zakho, ngaso sonke isikhathi. Sinikeza okungaphezulu kobuchwepheshe obuhle kakhulu bokubeka phambili kwezomthetho - sinikezela ngezixazululo eziyinkimbinkimbi, zomhlaba wonke ngensizakalo enziwe yomuntu uqobo.
Umthetho nokuningi futhi kuhlinzeka ngezisombululo zomthetho nezinsizakalo zamacala ezinkampanini nakubantu abathile. Yenza ukuhlolwa okulinganiselwe kahle kwamathuba nezingozi ngaphambi kwazo zonke izinqubo zomthetho. Isiza amaklayenti kusukela ezigabeni zokuqala kuze kube esigabeni sokugcina sezomthetho, asekela umsebenzi wawo kucebo elicabange kahle, elithuthukile. Le nkampani isebenza futhi njengommeli wasekhaya wezinkampani ezahlukene zasekhaya nezaphesheya.
Ngaphezu kwalokhu, inkampani inolwazi ekuqhubeni izingxoxo eziyinkimbinkimbi nezinqubo zokulamula eNetherlands. Okokugcina, sinikezela ngamakhasimende ethu izifundo zokuqeqeshwa kwenkampani, ezilungiselelwe ukulingana nezidingo zabasebenzi bazo, ngezihloko ezahlukahlukene zezomthetho, ezibalulekile kule nkampani okukhulunywa ngayo.
Wamukelekile ukubheka iwebhusayithi yethu, lapho uzothola khona eminye imininingwane mayelana noMthetho nokuningi. Uma ufisa ukudingida udaba oluthile lwezomthetho noma uma unombuzo mayelana nezinsizakalo zethu, sicela ungangabazi ukuxhumana.
Inkampani yethu iyilungu lenethiwekhi ye-LCS yabameli ese-Amsterdam, The Hague, Brussels naseValencia.
UMTHETHO KANYE OKWENGEZIWE
I-Copyright © 2020 Umthetho nokuningi kwe-BV